Yeremia kaa sɛnea ɔte nka ne anidaso a ɔwɔ
“Mede ntoboase bɛtwɛn” (21)
Onyankopɔn mmɔborɔhunu yɛ foforo anɔpa biara (22, 23)
Onyankopɔn ye ma wɔn a wɔde no ayɛ wɔn anidaso (25)
Eye sɛ mmabun bɛsoa kɔndua (27)
Onyankopɔn de omununkum siw ɔkwan a ɛkɔ ne nkyɛn (43, 44)
א [Aleph] 3 Mene ɔbarima a mede m’ani ahu amanehunu a n’abufuw abaa no de aba no. 2 Wapam me; wama manantew sum mu, na ɛnyɛ hann mu.+ 3 Ampa, ɔde ne nsa ko tia me da mu nyinaa.+ ב [Beth] 4 Wama me honam ne me were atwintwam;Wabubu me nnompe mu. 5 Wagye me ho ban; ɔde awuduru a ɛyɛ nwene+ ne amanehunu atwa me ho ahyia. 6 Wahyɛ me ama matena sum mu te sɛ nnipa a wɔawuwu dedaadaw. ג [Gimel] 7 Wagye me ho ban sɛnea ɛbɛyɛ a merentumi nguan;Ɔde kɔbere nkɔnsɔnkɔnsɔn a emu ayɛ duru agu me.+ 8 Sɛ misu hwehwɛ mmoa denneennen a, ontie me mpaebɔ.*+ 9 Ɔde abo a wɔapae asisiw m’akwan;Wakyeakyea m’akwantempɔn.+ ד [Daleth] 10 Ɔtetɛw baabi twɛn me te sɛ osisi, te sɛ gyata a wahintaw.+ 11 Wayɛ ama maman afi akwan no so, na watetew me mu nketenkete;*Wayɛ me pasaa.*+ 12 Wakuntun n’agyan mu,* na ɔde agyan no akyerɛ me so. ה [He] 13 Ɔde ne kotoku mu agyan* awɔ m’asaabo mu. 14 Madan obi a aman nyinaa hwɛ no serew; wɔde me to dwom daa nyinaa. 15 Ɔde ade a ɛyɛ nwene ahyɛ me ma, na wama awɔnwene akɔ me mu+ aboro so. [Waw] 16 Ɔde mmosea abubu me se;Wama mabutuw nsõ mu.+ 17 Woama asomdwoe abɔ me;* me werɛ afi adepa. 18 Enti meka sɛ: “M’anuonyam ayera, na m’anidaso a ɛwɔ Yehowa mu nso asa.” [Zayin] 19 Kae m’amanehunu ne sɛnea mayɛ adedamfikyiri no,+ na kae awɔnwene ne awuduru a ɛyɛ nwene no.+ 20 Nea ɛbɛyɛ biara, wobɛkae* na woakotow aboa me.+ 21 Mekae eyi wɔ me komam. Ɛno nti na mede ntoboase bɛtwɛn no.+ ח [Heth] 22 Yehowa dɔ a enni huammɔ nti na yɛn ase nhyewee,+Efisɛ ne mmɔborɔhunu to rentwa da.+ 23 Ɛyɛ foforo anɔpa biara;+ wo nokwaredi dɔɔso.+ 24 Maka* sɛ: “Yehowa ne me kyɛfa,+ ɛno nti na mede ntoboase bɛtwɛn no no.”+ ט [Teth] 25 Yehowa ye ma nea ɔde no ayɛ n’anidaso,+ onipa* a ɔhwehwɛ no daa no.+ 26 Eye sɛ onipa bɛyɛ komm atwɛn*+ Yehowa nkwagye.+ 27 Eye sɛ ɔbarima bɛsoa kɔndua wɔ ne mmeranteberem.+ י [Yod] 28 Sɛ Ɔde to no so a, ma ɔno nko ara ntena hɔ na ɔnyɛ komm.+ 29 Ma ɔmfa n’ano mmutuw dɔte mu;+ ebia na anidaso bi wɔ hɔ.+ 30 Ma ɔnnan n’asom mma nea ɔbɔ no; ma adapaatwa ntumi no. כ [Kaph] 31 Efisɛ Yehowa rentow yɛn nkyene daa.+ 32 Wama yɛadi awerɛhow de, nanso obehu yɛn mmɔbɔ esiane ne dɔ bebrebe a enni huammɔ no nti.+ 33 Efisɛ enni ne komam sɛ ɔbɛma nnipa mma ahu amane anaa ɔbɛhyɛ wɔn awerɛhow.+ ל [Lamed] 34 Sɛ obi pɛtɛw asaase so nneduafo nyinaa wɔ ne nan ase,+ 35 Sɛ obi bu ɔbarima atɛnkyea wɔ Ɔsorosoroni no anim,+ 36 Sɛ obi sisi obi wɔ n’asɛnni mu a,Ne nyinaa Yehowa nsosɔ so. מ [Mem] 37 Hena paa na obetumi aka biribi ama aba mu bere a Yehowa nhyɛe? 38 Nneɛma bɔne ne nneɛma pa;N’abien no rentumi mmom mfi Ɔsorosoroni no anom mma. 39 Adɛn nti na ɛsɛ sɛ onipa a ɔte ase nwiinwii wɔ ne bɔne+ ho nsunsuanso ho? נ [Nun] 40 Momma yɛnhwehwɛ yɛn akwan mu na yɛmpɛɛpɛɛ mu,+ na yɛnsan nkɔ Yehowa nkyɛn.+ 41 Momma yɛmma yɛn koma ne yɛn nsa so nkyerɛ Onyankopɔn wɔ soro+ na yɛnka sɛ: 42 “Yɛayɛ bɔne, na yɛatew atua,+ na woamfa ankyɛ.+ ס [Samekh] 43 Wode abufuw asiw yɛn kwan;+Woadi yɛn akyi akunkum yɛn, na woanhu yɛn mmɔbɔ.+ 44 Wode omununkum asiw ɔkwan a ɛba wo nkyɛn no, sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn mpaebɔ remfa mu.+ 45 Woama yɛadan nwura dodow ne sumina* wɔ amanaman no mu.” פ [Pe] 46 Yɛn atamfo nyinaa serew yɛn.*+ 47 Ehu ne amoa na atwa yɛn ho ahyia,+ amamfo ne ɔsɛe.+ 48 Me man babea a wɔasɛe no nti, nsu nam m’ani ase waawaa.+ sע [Ayin] 49 M’ani tew ara na ɛretew nisu; ennyae,+ 50 Kosi sɛ Yehowa besi ne ti ase afi soro ahwɛ.+ 51 Nea m’ani ahu ama me* werɛ ahow, me kurow mma mmea nyinaa nti.+ צ [Tsade] 52 M’atamfo ahwehwɛ me akyere me sɛ anomaa, nanso menyɛɛ hwee. 53 Wɔatwa me nkwa so wɔ amoa mu; wɔtotow abo boroo me. 54 Nsu bu faa me ti so, na mekae sɛ: “Mawu awie!” ק [Qoph] 55 O Yehowa, mebɔɔ wo din frɛɛ wo fii amoa ase tɔnn.+ 56 Tie me nne; misu frɛ wo sɛ boa me na ma minnya ahotɔ a, nsisiw w’aso. 57 Ɛda a mefrɛɛ wo no, wutwiw bɛnee. Wokae sɛ: “Nsuro.” ר [Resh] 58 O Yehowa, woadi m’asɛm* ama me. Woagye me nkwa.+ 59 O Yehowa, woahu bɔne a wɔde ayɛ me. Mepa wo kyɛw, bu atɛntrenee ma me.+ 60 Woahu wɔn aweredi nyinaa, ɛpɔw a wɔabɔ wɔ me ho nyinaa. ש [Sin] anaa [Shin] 61 O Yehowa, woate wɔn adapaatwa, ɛpɔw a wɔabɔ wɔ me ho nyinaa;+ 62 Woate wɔn a wɔsɔre tia me no anom asɛm ne huhuhuhu a wɔyɛ wɔ me ho daa nyinaa no. 63 Hwɛ wɔn. Sɛ wɔte hɔ oo, wogyina hɔ oo, wɔto dwom de bɔ me akutia! ת [Taw] 64 O Yehowa, wubetua wɔn ka sɛnea wɔn nnwuma te. 65 Wobɛma wɔn koma ayɛ den; ɛno ne nnome a wode bɛba wɔn so. 66 Yehowa, wubetiw wɔn wɔ w’abufuw mu, na woasɛe wɔn afi wo soro ase.
^ Anaa “osiw me mpaebɔ kwan.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wama mayɛ sɛ asaase a ada mpan.”
^ Anaa “Wama mayɛ sɛ kurow a abɔ.”
^ Anaa “wo kra bɛkae.”
^ Anaa “Me kra aka.”
^ Anaa “Eye sɛ onipa de ntoboase twɛn.”
^ Anaa “bue wɔn anom wɔ yɛn so.”
^ Anaa “me kra asɛm.”